10 Oge Ezumike Ọhụụ Kachasị mma na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Oge Ezumike Ọhụụ Kachasị mma na Europe
Oge Ọgụgụ: 9 nkeji
Ielọ ndị mgbe ochie, ubi-vine, breathtaking Okirikiri, bụ naanị ihe ole na ole na-eme ka Europe zuru oke maka ezumike ọdịda. Obodo Europe ọ bụla nwere ịma mma ya, mana ebe anyị dị 10 oge ezumike ọdịda kachasị mma na listi Europe bụ ole na ole kachasị mma ebe.
Europe kacha adọrọ adọrọ n’ọdịda mgbe a na-ese osisi na ugwu nta n’osisi na-egbuke egbuke, acha uhie uhie, odo. N'ọgwụgwụ Ọktọba, ọnụọgụ mmadụ ole na ole n'okporo ụzọ, nke a pụtakwara na ị ga-enwe ọmarịcha ọdịda na-elele onwe gị. Ọdịda bụ oge dị mma maka njem n'ihi na ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na ọnụ ahịa njem na-agbada nke ukwuu.
Ọ dị mfe ma dị mma iji ụgbọ oloko gaa na ebe ịtụnanya niile dị na ndepụta anyị. Site na ndagwurugwu Loire dị na France ruo Luxembourg, Njem ụgbọ oloko zuru oke maka ịhazi oge ezumike kachasị echefu echefu na Europe ịkwesịrị ịbanye na ụbọchị a.
Train Travel bụ ezigbo adaba na Eco-Enyi na Enyi Tozọ Njem. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Tiketi ụgbọ oloko dị ọnụ ala Weebụsaịtị N’ Thewa.
1. Ezumike Ezumike Na Umbria, Italy
Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-ahọrọ Tuscany maka ezumike ọdịda na Europe, mpaghara Umbria dị na Italytali bụ ihe dị oke egwu ma bụrụkwa otu n'ime njem njem ọdịda kachasị mma na Europe na Italytali.
Inweta ụgbọ oloko na-adị mfe si Rome, Umbria na-enye igwe mmadụ ole na ole na ọnụ ala ụlọ dị ọnụ ala karịa na Italytali. N'ọgwụgwụ Septemba ruo Ọktọba, you can enjoy the white truffle and new wine festival in towns like Gubbio. Ọzọkwa, could nwere ike ịga Perugia maka ememme Eurochocolate kwa afọ. Ya mere, Umbria obula banyere onwe gi na ebe nile, na-ekpori nri na mmanya kachasị mma n’oge ezumike ọdịda gị na Europe. N'oge njem dị mkpirikpi ma ọ bụ ogologo, live bi na ihunanya akwụkwọ ndo dị ka ebe, n'otu n'ime oge ezumike ọdịda kachasị mma na Europe.
Florence na tiketi Orvieto
Siena na tiketi Orvieto
Arezzo na Orvieto tiketi
Perugia na tiketi Orvieto
Foto ndị dị n'ịntanetị anaghị eme ikpe ziri ezi na anwansi Cinque Terre mpaghara na .tali. Lọ ndị mara mma dị n’elu ugwu, gbara ubi-vine gburugburu, ụlọ oriri na ọ localụ localụ obodo, na hiking ụzọ ụkwụ, niile na-eme ka mpaghara a bụrụ njem njem ọdịda dị ịtụnanya na Europe. Cinque Terre mejupụtara n'ezie 8 obodo nta na okporo igwe na-ejikọ ha niile na ibe ha. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ileta obodo niile 2-3 ụbọchị ma ọ bụrụ na ị dị mkpụmkpụ na oge. Kedu ihe ga - akacha mma karịa ịmịnye mmadụ ọzụzụ na otu n'ime ebe kachasị mma na Europe ọdịda?
Cinque Terre na-abụkarị mmiri na-ekpo ọkụ maka osimiri na mmiri pristine. Otú ọ dị, Ọ ka mma ileta ọdịda, nihi na okporo uzo di warara bu ndi nlere anya. Ya mere, ebe a na-emechi ọtụtụ ụlọ nri, ị ka nwere ike ịhụ ebe ghere oghe na-echere n'oké osimiri ma nwee mmasị na echiche ndị dị jụụ.
I nwere ike imefu 4 ụbọchị ịgagharị n'obodo ndị ahụ wee nọọ ogologo izu ụka na obodo La Spezia, ebe mmalite gị maka njem ụgbọ oloko na Cinque Terre. Site na La Spezia, train ga amakwa njem gaa obodo ozo ozo ichoro.
La Spezia na tiketi Manarola
Riomaggiore na tiketi Manarola
Sarzana na tiketi Manarola
Levanto na tiketi Manarola
3. Ọdọ Mmiri Lugano, Switzerland
Mmiri turquoise, ụlọ ndị nwere agba terracotta, ọdọ Lugano na Switzerland bụ otu n'ime njem njem ọdịda anyị dị elu na Europe. Switzerland nwere ọtụtụ ebe dị egwu maka ezumike ọdịda ahụ na-agaghị echefu echefu na Europe na Lugano bụ otu n'ime ihe ịchọ mma okpueze Switzerland..
Ọnọdụ okpomọkụ ka dị ọkụ n'etiti etiti Ọktọba, ị nwere ike ịnọdụ ala n'akụkụ otu iko mmanya si n'ubi vaịn ndị gbara ya gburugburu ma ọ bụ detụ polenta stew na ememme ụbịa ọdịnala.. Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịgbakwunye ntakịrị ọiteụ na obi ụtọ na ezumike ọdịda gị na Europe, you can hike up Monte Bre. Echiche sitere na ọnụ ọgụgụ kasị elu bụ ụfọdụ echiche na-akpali akpali nke Lugano Bay.
Ochie nke Lugano nwere ụlọ ime obodo mara mma, 10 kar, na okporo ụzọ ụlọ ahịa dị oké ọnụ ahịa Via Nessa. Nkpuru okwu, Ọdọ mmiri Lugano zuru oke maka ma ndị njem na-ahụ n'anya ma mara mma na ndị njem na-ahụ n'anya. Ọdọ mmiri dị na Lugano dị egwu maka izu ike dị mkpirikpi ma ọ bụ ezumike dị ogologo na Europe.
Nwere ike ịga njem ọdọ Lugano n'ụzọ dị mfe site na Milan Central n'ihe na-erughị otu elekere. Insgbọ oloko na-apụ kwa awa site na ọdụ ụgbọ oloko Milan.
Interlaken na tiketi Zurich
Lucerne na tiketi Zurich
Lugano na tiketi Zurich
Geneva na tiketi Zurich
4. Ezumike Ezumike Na Hannover, Germany
Hannover bụ obodo kachasị dị na Germany, mana otu n’ime ebe kachasị mma maka ezumike ọdịda na Europe. Obodo ukwu a bu nnukwu ogige, okpukpu abụọ ha ka nke Central Park dị na New York. Ancient oak trees and a ọdọ mmiri mara mma nọ n'ogige ntụrụndụ, dị mma maka ịgagharị na ubochi mgbụsị akwụkwọ.
Marktplatz Old Town na ụlọ elu elekere bụ nnukwu mmalite iji chọpụta ụlọ Gothic. Can nwere ike ịga n’ihu n’ Townlọ Nzukọ Obodo New, nnukwute ulo-elu dị ka mmiri na-anọ na ya. Ala ndị ahịhịa ndụ na osisi gbara ndụ gburugburu nnukwu obí ma mejupụta ikuku dị ebube ma na-ele ya na agba ọla edo.
Hannover bụ otu n'ime nkume ndị dị na Germany ma ọ nweghị ike ịdị mma na mgbụsị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ maka ezumike ọdịda anyanwụ na Europe, mgbe ahụ Hannover bụ ezigbo njem njem. Ọ bụghị ọtụtụ ndị njem nleta achọpụtala anwansi ya, ka, could nwere ike ịbụ onye mbụ nwere oge ndụ gị n’obodo.
Bremen ruo tiketi Amsterdam
Nyefee tiketi na Amsterdam
Bielefeld na tiketi maka Amsterdam
Hamburg na tiketi maka Amsterdam
5. Bavaria Alps Na Nwa Oke Oke ojii, Germany
Oke ohia ojii na Alu Bavaria bụ nhọrọ kachasị ewu ewu maka ezumike ezinụlọ na-ada na Europe. Mpaghara a dị ịtụnanya na Germany bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ọdịda njem na Germany.
Mgbe ị kwụsịrị ụgbọ oloko na otu n'ime obodo mara mma, will ga-eche ozugbo na ị rutere ozugbo na akụkọ nke nwanne Grimm. Ọdọ mmiri ndị dị egwu, na mmiri isi mmiri Triberg, ndagwurugwu na-acha akwụkwọ ndụ, na ubi vaịn na-ekwe nkwa ezumike ọdịda na-agaghị echefu echefu na Europe.
Akwụkwọ osisi ahụ na-agbanwe agba gaa na ụda ọla edo, mgbe n'azụ enwere ugwu ugwu snow-topped. Lamakpu n’ime ụlọ e ji osisi rụọ mgbe nnukwu njem gaa Alps bụ ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu. I nwekwara ike ịga otu n'ime ha 25 leslọ ndị dị n'ógbè ahụ na uslọ Neuschwanstein bụ nnukwu ụlọ ịtụnanya iji nyocha n'oge ezumike ọdịda gị na Europe.
Offenburg na tiketi Freiburg
Stuttgart na tiketi Freiburg
Leipzig na tiketi Freiburg
Nuremberg na tiketi Freiburg
6. Ezumike Ezumike Na Ahornboden, Austria
Ndagwurugwu Rissbachtal na Karwendel Alpine Park, bụ njem dị egwu na Austria maka ezumike ụbịa. Ala Alpine nke Ahornboden nwere 2,000 afọ Sycamore-Maple osisi na-achọ pụtara na ha n'oge mgbụsị akwụkwọ ekike nke ọla edo na oroma. Nature na ugwu ike nnọọ mma mma maka ebe kwesịrị ncheta ọdịda njem njem na Europe.
A na-atụ aro mpaghara a na Tyrol maka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ugwu na ndị ije nwere ahụmahụ. The National park nwere ọtụtụ nnukwu njem na ụzọ dị n’etiti ugwu nzu maka ezumike na-agaghị echefu echefu na Europe.
Salzburg bụ ikpe ziri ezi 3 awa awa si Ahornboden jiri ụgbọ okporo ígwè, gụnyere nnyefe. Na mgbakwunye, enwere nnukwu ụlọ nkwari akụ yana nhọrọ ụlọ na Grosser Ahornboden n'oge ezumike.
7. Ezumike Uzo Na Ndagwurugwu Loire, France
Tọ Loire Ndagwurugwu dị na mpaghara mmanya nke France. Nke a pụtara na 185,000 acres nke mkpụrụ vaịn na-amụnye ọla edo na mbubreyo Ọktoba. Ya mere, ọ bụ nnukwu otu n'ime ebe kachasị mma ileta na Europe na njem njem ọdịda dị egwu.
Ezie na ọtụtụ na-a njem nke ubochi site na Paris, a na-atụkarị aro ka ị nọrọ ogologo izu ụka na Loire Ndagwurugwu iji mejupụta anwansi na ịma mma ya. Ụzọ a, could nwere ike ịga otu ma ọ bụ abụọ n'ime nnukwu ụlọ ịtụnanya na ndagwurugwu ahụ, dị ka Chateau de Chambord. Somefọdụ na-ekwu na ọmarịcha ụlọ elu a dị ịtụnanya bụ De Vinci n’onwe ya.
The Blọ Chambord bụ 2 hours south of Paris and you can train travel from Paris Austerlitz to Blois-Chambord. Within an hour and a half, ị ga na-awagharị n'obí eze mara mma.
Paris na tiketi Strasbourg
Luxembourg na tiketi Strasbourg
Nancy na Strasbourg tiketi
Basel na Strasbourg tiketi
Onweghị ihe dị egwu na nke ịhụnanya karịa France n'oge ọdịda. Bordeaux bụ obodo mepere emepe nke dị na Frans na ebe obibi maka ogige-ụbi Saint-Emilion yana osimiri Arcachon, ndị a 2 ebe dị ole na ole bụ ihe ndị ga - eme ka ị daa na Nouvelle Aquitaine na Bordeaux. ulo elu, mmanya njegharị, spa agwọ ọrịa, na nkuzi esi esi nri, mee Bordeaux ka njem buru ibu mara nma maka ezumike gi.
N'ọgwụgwụ October, ọtụtụ ndị njem na-alaghachi n'ụlọ, yabụ ọnụ ahịa njem na ebe obibi na-agbada na Bordeaux. N'oge a ubi vaịn na-amalite ịghọrọ mkpụrụ vaịn ma ị nwere ike ịnọ otu n'ime ọtụtụ ebe a na-ekwurịta okwu na mpaghara ma belata. N'ezie nke a ga - etinye a ahụmahụ pụrụ iche gaa na foto akwụkwọ ezumike gị.
Mpaghara a dị oke mma iji ụgbọ oloko site na ebe ọ bụla na France, enwere ntuzi aka elu-ọsọ ụgbọ oloko site na ọdụ ụgbọ oloko Paris-Austerlitz na Montparnasse.
La Rochelle na tiketi Nantes
Toulouse na tiketi La Rochelle
Bordeaux na tiketi La Rochelle
Paris na tiketi La Rochelle
9. Ezumike Ezumike Na Paris, France
Oge ezumike ọdịda kachasị mma anyị na Europe agaghị ezu ezu na-enweghị Paris. Paris bụ ezigbo echiche mgbe niile, mana ọ kacha mara mma na ọdịda. Luxembourg Gardens, obere ụlọ oriri na ọ Frenchụ Frenchụ French, na egwu n'okporo ámá na-eme ka ọnọdụ dị mma maka ezumike echefughị ​​echefu na Europe.
Sip na-ekpo ọkụ ma ọ bụ lelee ememme owuwe ihe ubi Montmarte, Paris nwere ọtụtụ ọmarịcha oghere maka ịmịkọta foto ndị ahụ na-adọrọ adọrọ. Spotszọ kachasị dị nkọ foto bụ Jardins du Luxembourg, Parc Monceau, na Ubi a Tuili. Site na njedebe nke Ọktọba, enwere mmemme mgbụsị akwụkwọ kwa afọ n'ọtụtụ ebe n'ofe obodo egwu, gbaa egwu, na ihe ngosi nka. Ya mere, ma mmiri na-ezo ma ọ bụ nke anwụ na-acha, Paris na-enye ọtụtụ ihe dị ukwuu ime.
Ndị mmadụ juru na Paris enweghị ọnụ ahịa, ọnụ ahịa njem anaghị akwụkwa ụgwọ maka oge, ya mere njem ụgbọ njem na ebe obibi na-eme ka Paris bụrụ nnukwu njem njem ọdịda maka ezumike ndị Europe.
N'oge opupu ihe ubi, tulips ahụ na-achọ ubi na ogige Amsterdam mma, mana na ọdịda, oroma, odo na acha ọbara ọbara na-acha odo odo ọwa mmiri na n'okporo ámá. Amsterdam bụ ịma mma zuru oke na ya mere ọ bụ otu n'ime ebe ezumike ọdịda kachasị mma na Europe. Inwere ike ije ije na Amsterdam naanị 3 ụbọchị, mana ịchọrọ ịnọ ogologo oge ma kwusi n'akụkụ ọ bụla iji nwee ekele maka echiche ndị mara mma.
Amsterdam bụ obodo dị ịtụnanya maka ezumike na Europe, na 50 ngosi ihe mgbe ochie n'obodo, ụgbọ mmiri agafe na ọwa mmiri, enwere ọtụtụ ihe ịtụnanya ime na njem njem ọdịda a dị ịtụnanya na Netherlands. na mgbakwunye, enwere ogige ntụrụndụ dị egwu ebe inwere ike inwe pikinik ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe gburugburu ma ọ bụrụ na ihu igwe dị mma.
Amsterdam bụ otu n'ime obodo kachasị mma na Europe, inweta ụgbọ oloko site na ebe ọ bụla na mba ndị agbata obi, na mfe ịgagharị n’ime obodo.
ego: Ezumike Ezumike Na Luxembourg
Belgium, France, na Germany gbara obere obodo Luxembourg gburugburu, zuru oke ọdịda njem njem na Europe. Obodo nke Luxembourg ka amaara maka Obodo Ochie ya, dị n'elu ugwu ma bụrụ ebe e wusiri ike nke obodo gbara ya gburugburu. Ihe owuwu ya dị egwu na amara ụwa ochie emeela ka ọ bụrụ aha UNESCO ụwa nketa saịtị. Akwa Ducal Obí na Adolph bụ ndị a na-ahụ anya na ezumike gị na Luxembourg.
Ubi na ọtụtụ ebe a na-ahụ anya na-enye echiche na-atọ ụtọ maka obodo ahụ dum na ndị gbara ya gburugburu. N'oge mgbụsị akwụkwọ echiche ndị mara mma nke ukwuu n'oge mgbụsị akwụkwọ agba. Ya mere, ebe Luxembourg bụ obere obodo na Europe, ọ guzo nganga na-esote nnukwu cosmopolitan obodo ndị dị ka Paris. O doro anya na ịhọrọ Luxembourg maka ezumike gị na Europe n'oge ọdịda.
Ekele dịrị ndị ọrụ ụzọ dị elu, ị nwere ike ịga ebe ọ bụla na Europe na oge. Site na nnukwu obodo mepere emepe ruo na obere obodo ahụ dị oke egwu, obodo obula na anyi 10 obodo kachasị mma maka ezumike ọdịda na Europe, has its unique charm and magic.
Antwerp na tiketi Luxembourg
Brussels na tiketi Luxembourg
Tiketi metz na Luxembourg
Paris na Luxembourg tiketi
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala dị ọnụ ala karịa ebe ndị mara mma na ndepụta anyị.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Oge Ezumike Ọhụụ Kachasị mma na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-fall-vacations-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)